စူပါကွန်ပျူတာ ရဲ့ ယူရိုဗိုလ်စွဲနိုင်ချေ တွက်ချက်မှုမှာ ဘယ်အသင်းက ရာနှုန်းအများဆုံး ရခဲ့လဲ ? အင်္ဂလန်က ဘယ်လောက်လဲ ? – Sport Gaber
စူပါကွန်ပျူတာ ရဲ့ ယူရိုဗိုလ်စွဲနိုင်ချေ တွက်ချက်မှုမှာ ဘယ်အသင်းက ရာနှုန်းအများဆုံး ရခဲ့လဲ ? အင်္ဂလန်က ဘယ်လောက်လဲ ?
ပြိုင်ပွဲတစ်ခု စတင်ဖုိ့ နီးကပ်လာပြီ ဆိုတာနဲ့ အဆိုပါ ပြိုင်ပွဲမှာ ဘယ်သူတွေ ဗိုလ်စွဲ နိုင်ချေ ရှိတယ် ၊ ဘယ်ကစား သမားတွေ က ဘယ်လောက်ထိ ခြေစွမ်းပြ နိုင်မယ် ဆိုတာတွေ ကို လူသားတွေ ရော စက်ကိရိယာတွေ နဲ့ပါ ခန့်မှန်း ပြောဆို လာခဲ့တာ ဓလေ့ တစ်ခုလိုတောင် ဖြစ်လာ ခဲ့ရ ပါပြီ ။ ရှေးယခင် ကတည်းက လည်း ဒီလို သုံးသပ် ခန့်မှန်းမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ရေဘဝဲလ်လေး ပေါလ် ရဲ့ အောင်မြင်မှု အပြီးမှာတော့ ခန့်မှန်းမှုတွေ ဟာ ယခင်ကထက် ပိုပြီး အရေအတွက် များပြား လာခဲ့တာပါ ။
ဒီတစ်ခေါက် မှာလည်း လာမယ့် ၅ ရက် အကြာမှာ ကျင်းပ တော့မယ့် ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ဘယ် အသင်းတွေက ဗိုလ်စွဲဖို့ ရာခိုင်နှုန်း ဘယ်လောက် ရှိသလဲ ဆိုတာကို စူပါ ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြုကာ တွက်ချက် ခဲ့ကြ ပြန်ပါတယ် ။
ဒီလို တွက်ချက် ရာမှာ ပြိုင်ပွဲ၀င် အသင်းတွေရဲ့ ကစား သမား အင်အား ၊ နောက်ဆုံး ၆ လ အတွင်းက ခြေစွမ်း + ရလဒ် တွေ အပြင် ယူရို ၂၀၂၀ အုပ်စု အနေအထား နဲ့ ဗိုလ်လုပွဲဆီ သွားရာ လမ်းကြောင်းတွေကို အခြေခံကာ တွက်ချက် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလို တွက်ချက် အပြီးမှာတော့ လူကြိုက်များတဲ့ အင်္ဂလန် ဟာ နံပါတ် ၁ နေရာကို မရရှိခဲ့တာကို တွေ့ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဂါရတ် ဆောက်ဂိတ် ရဲ့ အင်္ဂလန် အသင်းဟာ လူငယ် နဲ့ ဝါရင့်တွေ အချိုးကျ ပေါင်းစပ် ထားပြီး ဒီနှစ် ဥရောပ ကလပ် ပြိုင်ပွဲရဲ့ အမြင့်ဆုံး အဆင့် ဖြစ်တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲရောက် ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ် ၂ ခုက အင်္ဂလန်သားတွေ နဲ့ အဓိက တည်ဆောက် ထားခဲ့ ပါတယ် ။
ဟယ်ရီကိန်း ၊ မေဆင်မောင့် ၊ ဖိုဒန် ၊ ဂရီလစ်ရှ် ၊ ဆန်ချို ၊ ရက်ဖိုဒ့် ၊ စတာလင် တို့လို နာမည်ကျော် ကစား သမားတွေ ပါ၀င် လာပြီး နောက်တန်းဟာလည်း ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲကထက် ပိုပြီး တောင့်တင်းတယ်လို့ သုံးသပ်ထားမှုတွေ ရှိခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ ဗိုလ်စွဲဖို့ အလားအလာ အကောင်းဆုံး မဟုတ်ခဲ့ ပါဘူး ။
ပြိုင်ပွဲ၀င် ၂၄ သင်းထဲမှာ မြောက် မက်ဆီဒိုးနီးယား ၊ စလိုဗက်ကီးယား ၊ စကော့တလန် ၊ ဟန်ဂေရီ ၊ ဖင်လန် ၊ သြစတြီးယား ၊ ချက် ၊ တူရကီ ၊ ဝေးလ် ၊ ယူကရိန်း နဲ့ ပိုလန် တို့ဟာ ဗိုလ်စွဲနိုင်ချေ ၁% တောင် မရှိခဲ့ကြဘဲ အုပ်စု အဆင့်ကနေ အိမ်ပြန် ကြရမယ့် အသင်းတွေ အဖြစ် သတ်မှတ် ခံထားရပါတယ် ။
အင်္ဂလန် အသင်းကတော့ ဗိုလ်စွဲ နိုင်ဖို့ အလားအလာ အရှိဆုံး ၁၀ သင်းထဲကို ပါ၀င် ခဲ့ပေမယ့် ဒိန်းမတ် ၊ နယ်သာလန် တို့ရဲ့ အောက်ကိုတောင် ရောက်နေခဲ့ ပါတယ် ။ နံပါတ် ၁ နေရာမှာတော့ အားလုံး မျှော်လင့် ထားတဲ့ ပြင်သစ် အသင်းက ရာခိုင်နှုန်း ၂၀ ကျော် နဲ့ ရပ်တည် နေခဲ့တာပါ ။
ယူရို ၂၀၂၀ မှာ ဗိုလ်စွဲ နိုင်ချေ အများဆုံး အသင်း ၁၀ သင်း –
၁၀ ။ ဆွစ်ဇာလန် – ၂.၃%
၉ ။ အင်္ဂလန် – ၅.၂ %
၈ ။ ဒိန်းမတ် – ၅.၄ %
၇ ။ နယ်သာလန် – ၅.၆ %
၆ ။ အီတလီ – ၇.၆ %
၅ ။ ပေါ်တူဂီ – ၉.၆ %
၄ ။ ဂျာမနီ – ၉.၈ %
၃ ။ စပိန် – ၁၁.၃ %
၂ ။ ဘယ်လ်ဂျီယံ – ၁၅.၇ %
၁ ။ ပြင်သစ် – ၂၀.၅ %
ယူရို ပြိုင်ပွဲကြီးကို လာမယ့် ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ ကနေ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့ အတွင်း ယှဉ်ပြိုင် ကစား သွားမှာ ဖြစ်ပြီး အုပ်စု ၆ စု က အုပ်စု ပထမ နဲ့ ဒုတိယ ၂ သင်းစီ ၊ အကောင်းဆုံး တတိယ ၄ သင်းတို့ ဟာ ၁၆ သင်း ရှုံးထွက် အဆင့်ကို တက်လှမ်း လာကြမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
တိုက်စစ်ကို အားဖြည့်ဖို့ ဟယ်ရီကိန်းကို ခေါ်ယူမယ့် ယူနိုက်တက်
နိုင်ငံအသင်းအတွက် အနိုင်ဂိုးသွင်းယူကာ ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်လူငယ်ကြယ်ပွင့် ဒီယာလို